नेकपा (एकीकृत समाजपादी) पार्टीलाई ठूलो झ' ट्का, जसपाले उछि'ट्यायो यति ठूलो पद!
नेकपा (एकीकृत समाजपादी) पार्टीलाई ठूलो झ’ ट्का, जसपाले उछि’ट्यायो यति ठूलो पद!
काठमाडौँ – नेकपा (एकीकृत समाजपादी) पार्टीलाई ठूलो झट्का लागेको छ । मुखैमा आएको उपसभामुख पद जनता समाजवादी पार्टीले लिएपछि नेकपा एसलाई झट्का लागेको हो ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा माधवकुमार नेपाललाई पछार्दै प्रतिनिधिसभाको सभामुख जसपालाई दिने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिले माधव नेपालको नयाँ पार्टीलाई झड्का लागेको हो । गठबन्धनले उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
२०७६ माघ ६ गते शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएयता सो पद रिक्त छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच छिट्टै उपसभामुख चयन गर्ने समझदारी बनेको हो।
प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दल र फरक लिंगको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल नेकपा माओवादीका अग्नि सापकोटा सभामुख छन्।
उपसभामुख आफ्नो पार्टीलाई दिने समझदारी बनेको जसपाका एक नेताले दाबी गरे । ती नेताले बताएअनुसार मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लगाउँदा नै उपसभामुख जसपालाई दिने समझदारी भएको हो। पटकपटक बसेको शीर्ष नेतासहितको बैठकमा यसबारे छलफल भएको उनले बताए।
‘जसपालाई उपसभामुख दिन गठबन्धनमा सहमति जुटिसकेको छ,’ उपेन्द्र यादवनिकट ती नेताले भने । उनका अनुसार जसपाभित्रसमेत यसबारेमा छलफल भइरहेको छ । गठबन्धनमै रहे पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा सहभागी नहुने र उपसभामुख पनि नलिने प्रष्ट पारिसकेको छ।
’तर, जसपाका ती नेताले भने प्रदेश १ र बागमतीमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति बनेकै बेला जसपालाई उपसभामुख दिने समझदारी बनेको दाबी गरे।
असोज १९ गते गठबन्धनले मन्त्रीहरुको भागबण्डा टुंगो लगाएको थियो। कांग्रेसका एक नेताले मन्त्री संख्या अपुग भएको दललाई उपसभामुख दिइने बताए। देउवा सरकारमा ५ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री मागेको जसपाले ४ मन्त्रालय मात्र पाएको छ। यसैकारण उसको दाबीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन्।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय लिएको छ। कांग्रेसलाई ६ मन्त्रालय दिने सहमति भए पनि महाधिवेशन नजिकै आइपुगेकाले नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न भन्दै देउवाले थप मन्त्रालय आफूलाई चाहिने बताएका थिए।
सट्टामा उनले एकीकृत समाजवादीलाई प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छाडिदिने र जसपालाई उपसभामुख दिने बताएपछि सहमति जुटेको थियो।
झण्डै तीन महिना मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेपछि देउवाको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो।प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक कात्तिक ९ गते बस्नेछ। नेताहरुले भनेझैँ उपसभामुखको विषयमा सहमति जुटिसकेको भनै आगामी बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाउने सम्भावना छ।
त्यसयता प्रतिनिधि सभा २ पटक विघटन भएपछि यो विषयले प्रवेश नै पाउन सकेको थिएन।प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ।
अगामी चुनावसम्म गठबन्धन बनाएर जाने समझदारी बनाएका ४ दलले उपसभामुखको चयनमा अर्को समझदारी ​बनाएर विश्वासको वातावरण बनाउन चाहेका छन्।